Nahazoana alalàn'ny mpampiditra rongony any Illinois | Izay rehetra tokony ho fantatrao
Ny fahazoan-dàlana amin'ny infuser ho an'ny Extracts cannabis any Illinois
Ahoana no ahazoanao fahazoan-dàlana mpampiditra rongony any Illinois?
Infuser Mombamomba ny mpanoratra dia fotodrafitrasa mampiditra mivantana ny rongony mifantoka amin'ny vokatra hamokatra vokatra vita amin'ny rongony. Ireo fotodrafitrasa ireo dia hahazo alalana avy amin'ny Departemantan'ny Fambolena ary mila manatanteraka takiana vitsivitsy mba hahazoana fahazoan-dàlana miasa.
Ny famonoana otrikaina indraindray dia afaka mitovitovy tantely
Eto ambany dia hitantsika ny sasany amin'ireo fitakiana ireo. H hosarohantsika ihany koa ireo fepetra napetraky ny lalàna ho an'ireo izay mikendry ny hametraka fahazoan-dàlana infuser ho an'ny fikambanana cannabis.
Famoahana fahazoan-dàlana amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana cannabis
Tamin'ny fiandohan'ny Jolay 2020, ny departemantan'ny fambolena dia namoaka fahazoan-dàlana ho an'ny fikambanana infuser hatramin'ny 40. Ny fangatahana ireo fahazoan-dàlana ireo dia hanomboka amin'ny 7 Janoary 2020, ary ny varavarankelin'ny fangatahana fahazoan-dàlan'ny mpampiditra any Illinois dia hakatona hatramin'ny 15 martsa 2020.
Tamin'ny faran'ny taona 2021, ny departemanta fambolena dia namoaka fahazoan-dàlana ho an'ny fikambanana 60 mpahazo. Talohan'ity daty ity, ny departemanta dia mety handray lalàna izay hanova io isa io.
Ny dingana sasany mety ho raisin'ny departemanta mba hampitomboana ny isan'ireo fangatahana fahazoan-dàlana amin'ny infuser, "Hanova na hampiakatra ny isan'ny fahazoan-dàlana infuser sy manova na manova ny fizotran'ny fahazoan-dàlana hampihena na hanafoana ny sakana."
Ny lafin-javatra vitsivitsy izay ho jeren'ny Departemantan'ny Fambolena raha mampitombo na mihena ny isan'ireo fahazoan-dàlana infuser dia:
Misy ny tsiranoka cannabis na cannabis infused vokatra hamenoana ny filan'ny marary cannabis fitsaboana.
Ny famatsiana vokatra ateraky ny cannabis dia tsy afaka mamaly ny fangatahan'ny mpampiasa ara-pitsaboana sy ny fialamboly
Loza azo antoka hanampiana orinasam-panafody maro kokoa na fananganana ireo fikambanana ireo any amin'ny faritra sasany
Ny ahiahy momba ny fiarovana voarakitra ao amin'ireo fikambanana infuser rehetra
Ny fanovana ny lalàna federaly mitaky ny fametrahana na ny fampihenan'ny orinasam-panararaotana
Ny departemanta fambolena dia tsy manana fahafaha-miasa amin'ireo fikambanana infuser fanampiny.
Fangatahana fahazoan-dàlana ho an'ny rongony rongony Illinois
Ny fangatahana fahazoan-dàlana ho an'ny infuser any Illinois dia hatao amin'ny alàlan'ny elektronika. Rehefa mandefa ny fangatahana dia takiana ireto:
Sarany fangatahana lisansa infuser tsy azo averina. Hatramin'ny volana Janoary 2021, dia 5,000 XNUMX $ io vola io. Aorian'ity daty ity, ny departemantan'ny fambolena dia mety hametraka vola hafa izay avo kokoa na ambany. Ity sarany ity dia halefa ao amin'ny tahiry famerana rongony
Ny anarana ara-dalàna an'ny mpanelanelana, ny adiresy ara-batana naroso ary ny anarana sy ny adiresin'ny mpikambana ao amin'ny birao sy ny tompon'andraikitra voalohany
Tatitra feno momba ny, "antsipirihany momba ny raharaham-pitantanana na ny fitsarana izay misy tompon'andraikitra ambony na mpikambana ao amin'ny biraon'ny infuser.
(i) meloka, meloka, voaloa, na manana fisoratana anarana na fahazoan-dàlana naatoana na esorina, na
(ii) nitantana na nanompo teo amin'ny biraon'ny orinasa iray na fikambanana tsy mitady tombom-barotra izay niniana meloka, voaheloka, nanameloka, na nanana fangatahana fisoratana na fahazoan-dàlana nampiato na foanana ”
Ny lalàna mifehy ny mpandehandeha dia harahina ao anatin'izany ny rafitra fanaraha-maso, ny drafitra fiarovana ary ny drafitry ny mpiasa
Ny traikefa eo amin'ny indostrian'ny cannabis, ary ny famaritana iray izay manondro ireo traikefa fangatahan'ireo mpangataka miasa amin'ny lakozia ara-barotra na any amin'ny laboratoara iray izay novokarin'ny vokatra natao ho an'ny olombelona.
Drafitra antsipirihany momba ny fomba hiatrehan'ny mpanondrana ny filàn'ny angovo, filàny rano ary fitantanana fako
Tany hahazoana fanesorana
Ny departemanta fambolena dia mety hamily ny fangatahana fikambanana infuser amin'ireto antony manaraka ireto:
Tsy nanome ny antonta ilaina rehetra ny mpangataka. Indraindray, "Raha mahazo fangatahana tsy misy fampahalalana ny sampan-draharaha misahana ny fambolena, ny Departemantan'ny fambolena dia mety hamoaka fampahalalana momba ny tsy fahampiana amin'ny mpangataka. Ny mpangataka dia manana 10 andro alimanaka manomboka amin'ny daty ny tsy fahampian'ny famoahana ny vaovao feno.
Raha toa ka tsy mahavita mametraka ny fampahalalana feno ny mpangataka iray na aorian'ny fanamarihana io dia tsy ho voatazona ilay fangatahana.
Ahoana ny fomba hamoahana ireo mari-pahaizana momba ny rongony rongony any Illinois
Ny departemanta momba ny fambolena dia takiana hamerenana rafitra iray izay mandefa ny fangatahana ataon'ny mpangataka fikambanana infuser liana. Ireo nahazo ny isa ambony indrindra dia homena alalana fahazoan-dàlana ny infuser. Mifototra amin'ny fampahalalana nomen'ny mpikarakara ny infuser, ny fananganana fandaminana ankapobeny ary ny fahazavana amin'ny fangatahana ny fanoratana.
Ny antony hafa tokony hodinihina dia misy:
Manao ahoana ny mety amin'ny toerany?
Ny mety amin'ny drafi-piofanana ho an'ny mpiasa
Ny firaketana an-tsoratra sy ny drafitra fiarovana
Drafitra momba ny tontolo iainana
Hahazo isa fanampiny ireo fikambanana mpi-infuser izay mikasa ny hampifandraisana ny fiarahamonina. Ny orinasam-panafody iray dia mety hampiseho ny faniriany hifanerasera amin'ny fiarahamonina amin'ny alàlan'ny, "mandray anjara amin'ny iray na mihoatra, fa tsy voafetra amin'ireto hetsika manaraka ireto:
(i) fananganana fandaharan'asa fampidirana natao hametrahana ny fandraisana anjara amin'ny indostrian'ny cannabis amin'ny olona izay mendrika ho Mpangataka Equity Social;
ii) manome fanampiana ara-bola amin'ny foibe fitsaboana fitsaboana fanararaotana;
(iii) ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora momba ny mety ho voka-dratsy ateraky ny fampiasana zezika; na
(iv) fepetra hafa mampiseho fanoloran-tena ho an'ny fiarahamonin'ireo mpangataka ”.
Azo avela ve ny fahazoan-dàlana?
Eny, ny departemanta fambolena dia manana zo handà fangatahana fampiharana raha toa ka tsapan'izy ireo fa tsy manaraka ny fomba sy fepetra takiana ny mpangataka. Tsy azo lavina ny fangatahana fahazoan-dàlana raha misy ny toe-javatra manaraka ireto:
Ireo fitaovana ilaina rehetra dia tsy alefa
Raha tsy manaraka ny fitsipika momba ny zon eo an-toerana ny mpangataka
Raha misy mpikambana ao amin'ny birao sy tompon'andraikitra lehibe dia latsaky ny 21 taona
Ny fahazoan-dàlana mialoha ny fahazoan-dàlana fahazoan-dàlana ho an'ny olon-dehibe
Ny fangatahana famerenam-bokatra ho an'ny fambolena cannabis
Ny zavatra sasany takian'ny fikambanana infuser dia misy ny:
Antontan-taratasy fandidiana feno izay mamaritra ny fomba fiasa, ny rafitra fanaraha-maso, ny fitahiry ny firaketana ary ny drafitry ny mpiasa
Ny drafitry ny fiarovana izay natsangan'ny infuser organisation dia tokony hojeren'ny polisy
Ny fanodinana ny vokatra voapoina cannabis dia hatao any amin'ny toerana voatokana. Ny fidirana amin'ity sehatra ity ihany koa dia ferana toy ny voafaritra ao amin'ny lalàna.
Hozaraina amin'ny fikambanana dispensing ny vokatra voa-zatra
Ny orinasam-panararaotana dia voarara tsy hanavakavaka mivantana na tsy ankanavaka ny vidiny rehefa amidy any amin'ireo fikambanana miangona hafa. Ny vokatra rehetra nataon'ireo fikambanana infuser dia takiana amin'ny kalitao avoakany sy ny vidiny mitovy ihany ho an'ny mpividy rehetra.
Hevitra farany momba ny lisansa infuser cannabis
Ny voalaza etsy ambony dia ny sasany amin'ireo fepetra takian'ny lalàna ho an'ireo mitady hametraka orinasam-panafody. Hisy fepetra takiana bebe kokoa satria asaina hijanona hatrany ny hiova. Ireo izay maniry ny hiditra amin'ity indostria ity dia mila manaraka hatrany ny zava-mitranga.
Raha te hahomby ianao dia tokony hifandray amin'ny a mpisolovava tafahoatra iza no afaka manampy anao hahafantatra ny fepetra rehetra ilaina amin'ny fahazoan-dàlana. Izy ireo dia hiantoka fa ny fandefasanao amin'ny alàlan'ny fotoana voalohany. Miaraka amin'ny mpisolovava iray, dia ho mora ihany koa ny manohy miasa amin'ny fanajana ny lalàna.
Fahazoan-dàlana ho an'ny infuser - ny iray azonao raha te-hanao brownies hahazoana tombony any Illinois ianao.
Hey, tom aho - tadiavo aho amin'ny alàlan'ny mpisolovava rongony googling ary mankanesa any amin'ny tranokalan'ny mpisolovava orinasa rongony hanontany izay fanontaniana apetraky ny ekipanao. Miaraka amin'ny fahazoan-dàlan'ny mpampiditra - ny lohahevitra anio - Nanao zavatra somary hafa noho ny fahazoan-dàlan'ny processeur any andrefana i Illinois - hanao antsitrika lalina amin'izany isika- ka mijanona eo ary holazaiko anao ny fomba hahazoana ireo serivisy fitrandrahana mety hafangaro amin'ny fotoana ny fahazoan-dàlana mpampiditra.
Noho izany misoratra anarana, mametraha fanontaniana ao anaty hevitra, ary omeo zoro izahay ary manantena hahita anao ny Alarobia amin'ny Legalization News - alao an-tsaina izao, andao hiroboka ao amin'ny lisansa Infuser.
Ny departemanta ag any Illinois dia hamoaka fahazoan-dàlana fampidirana 40 amin'ny volana jolay 2020, ary 60 hafa amin'ny volana desambra 2021. Tsy fantatray hoe ohatrinona ny fahazoan-dàlana ho avy aorian'ny 2022 - saingy toa tsy misy fetran'ny lalàna novain'ny departemantan'ny ag taorian'ny izany. Hiankina amin'ny famatsiana ireo vokatra ampidirina toy izany izay ampy - izay heveriko fa tsy maintsy hiandrasana isika ary hijery ny fomba nametrahan'ny mpanjifanao izany. Hividy ianao.
Cake mofomamy? Brown brownies? Siligaoma vita amin'ny vatosoa, vatomamy mafy - na ny fenitra volamena ho ahy… Lagunitas THC-brau vaovao. HiFi hops - any California, Colorado izao - ary mety amin'ny 2021 - Illinois araka ny fantatrao dia manana efitrano fandraisam-bahiny i Lagunitas ao amin'ny faritra Chicagoland.
Marihina - ny fahazoan-dàlana famindrana no mora indrindra raha ny sarany aloa no alain'ny fanjakana. Feno 5 ny fangatahana, avy eo 5 ny mandresy - avy eo ny sarany 20,000 XNUMX $ isan-taona aorian'izay.
Hivoaka amin'ny Janoary 2020 ireo fangatahana ireo, antenaina fa hahazo fitsipika bebe kokoa isika - fa ny zava-dehibe indrindra amin'ny fampiharana ao anaty lalàna no hitantsika.
Tsy hafa izany amin'ny hafa koa lisansa cannabis. Mila manao fampahafantarana sy drafitra marobe momba ny fomba fiasan'ny orinasa ianao, mitahiry firaketana, drafitra momba ny mpiasa, drafitra fiarovana ary fanaraha-maso. Tokony hampiharihary izay mety ho fizotry ny raharaham-pitsarana na ara-pitsarana, madiodio amin'ny hetra sy ny fanampiana ny zaza, araha-maso. Ny mombamomba ny olona manana mihoatra ny 5% ny fahazoan-dàlana. Lazalazao ihany koa ny fanaovanao asa -
Eto Ny mari-pahaizana ara-tsosialy any Illinois amin'ny indostrian'ny rongony dia taratry ny mponina ao amin'ny fanjakana - ireo fanao asa ireo dia tsy maintsy naneho ny fomba hampahafantaran'ny orinasanao, hanakarama, hampianarana azy ireo - vitsy an'isa, vehivavy, veterana, olona sembana ary manana fomba fanao amin'ny asa sy fiarovana ny mpiasa.
Ankoatr'izay - tokony hampiseho traikefa amin'ny fanazaran-tena na fandraharahana mampiroborobo ny tanjaka ara-toekarena amin'ny faritra misy fiantraikany ratsy ianao. Ireo sarintany ireo dia mifandraika amin'ny fahantrana an-tanàn-dehibe any amin'ny fanjakana - izy ireo no misy ny fanjakana ary ny sari-tany ofisialy dia an-tserasera ao amin'ny tranonkalan'ny DCEO. Ny mpangataka koa dia manana 20% ny isa nomen'izy ireo ho mpangataka fitoviana ara-tsosialy.
Avy eo ny fampiharana dia miverina any amin'ny gritty grip amin'ny fahaizan'ny infuser - mila mamoaka antsipiriany momba ny trano mihidy mihidy izay hametrahana rongony izy ireo. Tsy maintsy fararanao ny zavatra niainanao miasa amin'ny lakozia ara-barotra na fanaovana laboratoara vokatra hohanin'ny olombelona. Avy eo tanisao ireo diplaoma na mari-pankasitrahana sy traikefa mifandraika izay anananao sy ny ekipanao amin'ireto orinasa mifandraika amin'ny sakafo ireto.
Avy eo, tahaka ny mpanazatra ny asa tanana dia mila manazava ny fomba fikajiana momba ny tontolo iainana sy maintso mba hanampy amin'ny fiarovana ny angovo ao amin'ny orinasanao.
Mitohy toy ny firongatry ny asa tanana sy ny isa omena ho an'ny:
Ny fahaiza-manao an'io fotodrafitrasa io - koa raha mieritreritra ianao fa mora eo amin'ny toeranao dia miala amin'ny fanandramana fotsiny. Alao antoka fa inona no tianao hatao - ny trano dia tsara, azo antoka, mahomby angovo toy ny heck.
Mety amin'ny drafitra fanofanana mpiasa - mahazoa traikefa
Politika fiarovana sy fitahirizana rakitra - hazondamosin'ny indostria- dia misy koa ny fanaraha-maso AV 24 ora.
Drafitra fiarovana sy fanoratana labozia - aka alao antoka fa afaka mahafeno fepetra mora foana ny fatra ianao ary mandà ny fampitandremana momba ny kaontenera THC sy ny zaza tsy ampy.
(teboka kely -2% amin'izany) isa momba ny tontolo iainana, drafitry ny fahasamihafana, Illinois sy tompona veterana ary fikaroham-pokonolona bonus ho an'ny fifandraisana.
Ireo infuser dia mety manana "akora tsy misy" ihany raha resaka rongony - izay faritan'ny lalàna ho fitrandrahana tian'izy ireo ampidirina ao amin'ny vokariny.
Raha ny marina, ny lalàna mandrara ny mpamono tsy hanao ny fitrandrahana cannabis dia mifangaro amin'ny voninkazo cannabis izay mazàna mamaritra ny mpanamboatra tsikera amin'ny orinasa. (410 ILCS 705 / 35-25 (n)) -
Na izany aza, ny departemantan'ny Ag dia mety hamaha ny fahazoan-dàlana hikirakira ny fitrandrahana tahaka izany - araka ny lalàna napetraky ny mpanelanelana, fa eo am-bavahady kosa - ny fahazoan-dàlana maodely Infuser dia tsy manana singa mitrandraka - fa mila lisansa mitombo asa tanana ianao ka google izay.
Fa raha te-hanao zavatra mahafinaritra amin'ny THC ampidirina ao ianao - aza misalasala mankafy sy misoratra anarana na mitsidika ahy amin'ny mpisolovava orinasa rongony amin'ny alàlan'ny googling mpisolovava cannabis na "fahazoan-dàlana infuser" ary manantena aho fa mankafy ny lafaoro misy pozoma Lagunitas amin'ny taona 2022.